INDEX amin'ny votoatiny - Geofumadas
Ity pejy ity dia eo an-dalam-panamboarana, eo amin'ny fikarohana ny lohahevitra ampiasain'ny bilaogy; Na dia ato amin'ity lahatsoratra ity aza dia afaka mahita an'io ianao tanisao ireo fandaharam-pitenenan'i Geofumadas.
Fandraisana anjara amin'ny Excel
Fifandraisana amin'ny GIS
Fampiofanana sy boky
Fampitahana amin'ny hafa
Momba ny ESRI
Fifandraisana amin'ny CAD
Fifandraisana amin'ny Google
Ampifanaraho amin'ny GIS
Ampifanaraho amin'ny CAD
Famaritana ny Google Earth
Fandaharana mitovitovy amin'izany
Ny vokatra hafa Bentley
Fihaonambe sy zava-nitranga
Ahoana no hanaovana izany?
Momba ny GIS Manifold
Ireo lahatsoratra izay voalaza
Ahoana no hanaovana izany amin'ny gvSIG
Fampiofanana sy fihaonambe
Fanadihadiana sy fitaovana
GPS sy EQUIPMENT
Fanadihadiana mampiasa AutoCAD
Fanadihadiana mampiasa mikrosta
Topografia sy GIS
Fanadihadiana sy fampianarana
Fampiasana GPS amin'ny finday
Articles izay misy ny GPS
15 valiny amin'ny "INDEX OF Contents"
Ny hariva tsara dia azonao atao ny mampahafantatra ahy ny toerana ahafahako manangona rivotra sy làlana ao Honduras. Na izy ireo dia avy amin'ny pejy farany sy avy amin'ny geoportal an'ny ICF.
mafy izay. Mety ho avy any amin'ny toerana rehetra izy ireo.
Mangataha, no ataoko NIANATRA sy ny fanao GEOMATICA, ME efa nanome an'habakabaka sary nalaina avy Google Earth, Nefa aoka ho fantatrareo ny toerana misy anao, izay ankoatra ny Meksika, AS dia mety ny toerana misy anao?
Héctor Donato Montañez hoy izy:
Tiako ny hampahafantatra anao fa diso ny nisafidiananao lalana ho an'ny daholobe tao Calle Pedro Echagüe Oeste N ° 149 ary mifandray amin'i Calle Sarmiento Norte izay misy vavahady manokana, ity tanàna ity dia ao an-tanànan'i San Juan - Capital an'ny Faritanin'i San Juan, Repoblika Arzantina. Ny tsy fananana vavahady mamakivaky ny làlambe Pedro Echagüe dia tsy midika hoe ampahibemaso izy io. Noho izany dia mangataka aho mba horaisina ireo fepetra ilaina aloha hahitana raha marina izay lazaiko ary raha marina izany, mangataka aho mba hamafana ireo sary miely.
Miaraka amin'ny template exel. Ao amin'ny faritra ambony dia misy rohy.
Alfredo hoy izy:
Ahoana ny famadihana ny lisitry ny kôdôgrafika ara-jeografika mankany utm
Tokony ho tsara kokoa ianao.
Amin'ny ankapobeny, tokony handamina rafitra rafitra iray ianao,
dia tsy maintsy mamindra azy amin'ny alalana fantatrao ianao, ary mamerina izany raha ilaina izany.
Soraty amin'ny lohateny (at) geofumadas. com ary dia hanazava bebe kokoa amin'ny antsipiriany izahay.
Afaka refernciar toy ny DXF rakitra izay tsy ao mihitsy mandrindra ao amin'ny filanjana mandrindra? Mino aho fa amin'ny MicroStation fácil..pero kokoa tsy toy ny ..
Manana fangatahana aho, toy ny ataoko mba hamantatra ireo soatoavina tsy dia misy dikany mifandraika amin'ny lanjany.
Raha miresaka momba ny lalàna any Honduras ianao:
-Supongan cadastral fanadihadiana an-drenivohitra nanomboka tamin'ny roa taona: Inona no sarobidy mihatra?, Raha manana soatoavina sy tsy namarana, tsy maintsy ampiharina 100%.
Inona no tokony hikarakara ny mety ho fanoherana ny Fitsarana Ambony ny Auditors, raha tsy maneho porofo ny soatoavina dia nanatsoaka hevitra, dia mitaky azy ireo hanangona soatoavina noho ny 100%.
Ny fifanarahana dia mitana anjara toerana, ka tsy misy fiantraikany ny fiantraikany, rehefa ampiasaina ny cadastre.
Ny lafiny iray hafa, inona no karazan-tsarimihetsika misy ny soatoavina izay lazainy fa manana?. Moa ve ny trano, miaraka amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao? Midika ve ny sanda amin'ny tanan-dehibe? Midika ve ny soatoavina ambanivohitra ambanivohitra sy ny vokatra maharitra?
Raha katalana vaovao efa nomanina vao haingana izy ireo, misy sanda vaovao nohavaozina. Ny fampiharana azy ireo amin'ny 100% dia mety hisy fiantraikany ratsy, satria ny olona, ​​raha zatra mandoa fotsiny no anaovany izany, na tsy nandoa vola fotsiny dia hahatsapa mafy. Ity fa tsy handray tombontsoa, ​​dia hampitombo ny default, satria ny olona ihany no tonga eo amin'ny Kaominaly mba hijery rehefa tokony handoa izy ireo, ary rehefa fantany fa ny lanjan'ny hafa dia handehandeha fotsiny.
Koa, ny tokony handaminana dia ilaina. Samy hanohana alohan'ny TSC ny asan'ny mpanolotsaina misokatra, ary koa ny manelingelina ny fiantraikan'ny teknolojia.
Yaredi Harobi Mejia Paredes hoy izy:
Ao amin'ny Distrika sasany dia manana katalaonan'ny soatoavina 2015-2019 dimy taona, na izany aza, tsy misy ny fanadihadiana ara-teknika any ambanivohitra, mety ho an'ny departemantan'ny Cadastre hanangana fizotran'ny fifanarahana amin'ireto soatoavina ireto na izay mety ho dingana mety tsara hatao. 30% amin'ny fanadihadiana ara-teknika, inona no hatao amin'ny toe-javatra tahaka izany.
LUIS ARMANDO ROJAS hoy izy:
Alao maraina, ny orinasa izay iasako miasa, dia mahaliana fahazoana drone, miaraka amin'ny fakantsary multispectral sy photogrammetric, ao anatin'izany ny rindrambaiko momba ny drafi-piaramanidina sy ny fandalinana sary, izay mamela ny fisavana ny fambolena sy ny biby amin'ny alàlan'ny fampiasana ny UAV. Ho fantarina amin'ny tena fotoana ny toeran'ireo toeram-pambolena sy ny fikatsahana ny fanatsarana ny fahombiazany, ny fanombanana ny fanaraha-maso ny bibikely sy ny karazana ary ny kalitaon'ny fanondrahana.
Te-hanolotra ny soso-kevitrao aho
Manana fahazarana izay mampiavaka ny CAD manatona ny tsipika fihaonan-dalana polylines na AutoCAD na MicroStation na.
Gachuz hoy izy:
Izaho dia mamorona rakitra kilometim-peo google miaraka amina kojakozan'ny utm (teboka 20) ary mpanondro ho an'ny koordinatera tsirairay, ID8L980G 20.408165 -99.36207333 (identifier, latitude, longitude), ny file kml dia namboarina ao amin'ny utm 8L980G zone 14 Q 462223.62 m E 2256691.52 Fa rehefa manova azy ho dwg autocad dia manome data roa samihafa eo an-danin'ny tanana iray ny identifier ary etsy an-danin'izany dia manome ahy ireo teboka izy, inona no mitranga ??????